Jean-Jacques Muyembe-Tamfum: ilay siantifika kôngôley nahita ny fitsaboana Ebola · Global Voices teny Malagasy
'Tsy hiteny intsony isika hoe tsy azo tsaboina ny Ebola'
Voadika ny 29 Aogositra 2019 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, Swahili, polski, Español, English
Sierra Leone: Mpiasan'ny fahasalamana miomana hiditra ao amin'ny faritra hitsaboana ny marary. Sary Flickr avy amin'i EC/ECHO/Cyprien Fabre, 2 Aogositra 2014. (CC BY-NC-ND 2.0)
Nanamafy ny OMS fa nahitana “fivoarana izay hitondra vintana tsara kokoa hahaveloman'ny marary,” ireo fanafodin'ny Ebola, ary nanamafy ihany koa fa ” mahomby kokoa amin'ny fitsaboana Ebola ny roa amin'ireo fanafody efatra voasedra.”
Nanambara i Muyembe-Tamfum hoe: “Tsy hiteny intsony isika hoe tsy azo sitranina ny EVD [aretina viriosy Ebola].”
Raha miorina amin'ny asa tsy nitandro hasasarana an'i Muyembe-Tamfum, nisedra fanafody efatra hitsaboana Ebola ny siantifika: ZMapp, remdesivir, mAb114 ary REGN-EB3. Ny valin'ny andrana fanomezam-panafody tamin'ny mpandray anjara miisa 499 no naneho fa ny marary nokarakaraina tamin'ny “REGN-EB3 na mAb114 no nanana vintana lehibe kokoa ho velona” raha oharina amin'ireo notsaboina tamin'ny fanafody roa hafa.
Efa hatramin'ny taona 1976 tamin'ny fotoana mahampanao fikarohana voalohany azy handeha any amin'ny faritra nisian'ny fiparitahan'ny aretina voalohany tao RDC no nanaovan'i Muyembe-Tamfum fikarohana ity Ebola ity.
Dr Jean-Jacques Muyembe, tale jeneralin'ny Ivontoeram-Pirenena misahana ny Fikarohana Biomedikaly ao amin'ny Repoblika demaokratikan'i Congo sy ny ekipany nahita fomba vaovao fitsaboana ny soritr'aretina Ebola ao anatin'ny ora iray monja ✊???
Prefesoran'ny mikrobiolojia ao amin'ny Sekolim-Pitsaboana an'i Oniversiten'i Kinshasa ao RDCongo, tao anatin'ny efapolo taona no niasany ho fitsaboana ny aretina. Tamin'ny taona 1995 izy niasa niaraka tamin'ny WHO/OMS tamin'ny fametrahana arofenitra raha mahatsikaritra sy fanarahamaso ny refy tao amin'ny fiparitahan'ny aretina Ebola voalohany tany an-tanandehiben'i Kikwit, RDCongo.
Profesora Muyembe-Tamfum (mipetraka mitana mikrô) miteny mandritra ny lanonana iray tao amin'ny fanabeazam-bahoaka tao Beni, Kivu Avaratra, RDCongo, tamin'ny Septambra 2018. Saripika MONUSCO/Aqueel Khan (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ny taona 1976 no nandraketana voalohany ny fisian'ny tranga Ebola tany akaikin'ny renirano Ebola any RDCongo. Araka ny Foibe Fisorohana sy Fanarahamaso (CDC), nanomboka teo ny viriosin'ny Ebola no “nipongatra isa-potoana niala tao amin'ny toerana voajanahary misy azy (izay tsy mbola fantatra ny misy izany hatramin'izao)” ka mamindra aretina amin'ny vahoakan'i Afrika.
Ireo fiparitahan'ny viriosy Ebola hatramin'ny taona 1976. Sarintany avy amin'ny Foibe Fisorohana sy Fanarahamaso ny aretina
Tanelanelan'ny taona 2014 sy 2016, nihoatra ny 28.600 ny trangan'Ebola voarakitra tao Afrika Andrefana. Araka ny tatitra navoakan'ny WHO/OMS tamin'ny taona 2015 :
Nigeria nandraketana tranga 20 ary nahitana 8 maty. Nambaran'ny WHO/OMS ho “sombin’asa fitsingoan-dia valan'aretina kilasy-manerantany” ny nahafahan'i Nizeria nifehy ny viriosy
Niteraka fikoropahana sy tabataba manerantany ny fandravaravan'ny Ebola ireo firenena afrikana tamin'ny taona 2015 raha nisy marary roa maty tany Etazonia ary iray avy tany Espaina sy Alemaina. Gaby‐Fleur Böl, mpikaroka iray ao amin'ny Ivontoerana Federaly Fanombanana ny Risika ao Berlin, Alemaina, nahaavaka tranga vitsivitsy hafa tany Espaina, Alemaina, UK, Italia ary Soisa. Tamin'izany fotoana izany, ny fahatraran'ny Ebola dia noheverina ho fanamelohana ho faty noho ny tsy fisian'ny fitsaboana mahomby.
Araka ny nomarihan'i Böl, ny taham-pahafatesan'ny Ebola sy indraindray koa “ny fanitarana diso tafahoatra ny fitateran'ny fampitam-baovao” ilay valan'aretina no miteraka kiakiakam-pikorontanana manerana izao tontolo izao.
Nohamarinin'ny fanadihadiana nivoaka tamin'ny taona 2017 izany toeran-kevitra izany izay namakafakan’i Hal Roberts, Brittany Seymour, Sands Alden Fish II, Emily Robinson ary Ethan Zuckerman tantara mihoatra ny 109.000 nivoaka tamin'ny mediam-paritra/be mpanaraka ao Etazonia sy bilaogy tanelanelan'ny Jolay ka hatramin'ny Novambra 2014, izany nifantoka tamin'ny tatitra momba ny Ebola.